मार्टिन लूथर, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
मार्टिन लुथर: उनको जीवन र ईसाई धर्ममा योगदान
मेरो मनपर्ने अंशकालिक कार्यहरू एक वयस्क शिक्षा केन्द्रमा इतिहास पढाइरहेको छ। हामी हालसालै बिस्मार्क र जर्मनीको एकीकरण भएर गयौं। पाठ्यपुस्तकले भन्यो: बिस्मार्क मार्टिन लुथर पछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जर्मन नेता हो। एक सेकेन्डको लागि म त्यस्तो ईश्वरतान्त्रिक चिन्तकलाई किन यस्तो उच्च प्रशंसा दिन सकिन्छ भनेर व्याख्या गर्न प्रलोभित भए, तर त्यसपछि मैले सम्झें र यसलाई बेवास्ता गरें।
यहाँ यो फेरि उठाइन्छ: जर्मनीको धार्मिक व्यक्तित्वले अमेरिकी पाठ्यपुस्तकमा किन यति उच्च स्थान दिन्छ? विश्व इतिहासको सबैभन्दा प्रभावशाली चरित्र मध्ये एकको लागि उचित रूपले मनमोहक परिचय।
एक व्यक्ति कसरी परमेश्वरसंग न्याय गर्न सक्छ?
प्रोटेस्टेन्ट सुधारको केन्द्रीय व्यक्तित्व मार्टिन लुथर १ 1483 मा जन्म भएको थियो र १ 1546 मा उनको मृत्यु भयो। उल्लेखनीय ऐतिहासिक व्यक्तित्वको युगमा उनी दैत्य थिए। माचियावेल्ली, माइकल एन्जेलो, इरास्मस र थोमस मोरस उनका समकालीनहरू थिए; क्रिस्टोफर कोलम्बसले यात्रा सुरु गरे जब लुथर ल्याटिन स्कूलको स्कूल गए।
लुथरको जन्म ईस्लेबेनको थुरिंगियन सहरमा भएको थियो। यस्तो अवस्थामा जब बच्चा र शिशु मृत्युदर 60०% वा अधिक थियो, लुथर जन्म दिनको लागि भाग्यशाली थिए। उनका बुबा हंस लुडर, एक पूर्व माइनर, तामा स्लेट खानी मा एक अग्रदूतको रूपमा यो समृद्धि भएको थियो। लुथरको स of्गीतप्रतिको प्रेमले उनलाई उनका बाबुआमाको कडा पालनपोषणको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्‍यो, जसले उसको ख्याल राख्यो, तर कठोर हातले सजाय पनि दियो। सोह्र मा, लुथर पहिले नै एक सक्षम ल्याटिन थियो र एरफर्ट विश्वविद्यालय पठाइयो। १ 1505०XNUMX मा, बाईस वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो मास्टर डिग्री हासिल गरे र दार्शनिकको उपनाम।
उनका बुबाले मास्टर मार्टिन राम्रो वकील बनाउन निर्णय गरे; त्यो युवकले विरोध गरेन। तर एक दिन, मन्सफिल्डदेखि एरफर्ट जाने क्रममा मार्टिन ठूलो आँधीबेहरीमा डुबे। बिजुलीको सानो टुक्राले उसलाई भुईंमा फ्याँकि दियो र राम्रो क्याथोलिक चलन अनुसार उसले करायो: मलाई सहायता गर्नुहोस्, अन्ना, म एक भिक्षु बन्न चाहन्छु! उनले त्यो शब्द सम्मान गरे। १ 1505०1507 मा उनले अगस्टिनियन हर्मिटको क्रम प्रवेश गरे, १०XNUMX मा उनले पहिलो समूह पढे। जेम्स किटलसन पछि (लुथर दि सुधारक), साथीहरू र भाइहरूले अझै जवान भिक्षुमा उल्लेखनीय लक्षणहरू पत्ता लगाउन सकेनन्, जसले उनलाई दस छोटो बर्षमा यस्तो असाधारण व्यक्तित्व बनायो। लुथरले पछि भने, "यदि यो एक भिक्षुको रूपमा स्वर्गलाई जित्न सम्भव भएको भए, यसको उपवास र तपस्या अभ्यासको साथ, आदेशको नियमहरुमा उनको कडा पालनको बारेमा, हो कि उसले पक्कै पनि बनाएको हुन्छ।"
लुथर अवधि सन्तहरू, तीर्थयात्रीहरू र सर्वव्यापी मृत्युको युग थियो। मध्य युगको अन्त्य भयो र क्याथोलिक धर्मशास्त्र अझै पछाडि पछाडि थियो। युरोपका धर्मगुरुहरूले आफूलाई बस संस्कार, पुजारीवर्गले गरेको कबुली र उत्पीडन जस्ता कानुनी मागको घेरामा डुबेको देखे। तपस्वी जवान लूथरले विलाप, भोक र तिर्खा, निन्द्राबाट बञ्चित हुनु र आत्म-चाप बढाउने बारेमा गीत गाउन सक्थे। यद्यपि, उनको अन्तस्करणको आवश्यकता पूरा हुन सकेन। कडा धार्मिक अनुशासनले उसको अपराधको भावनालाई मात्र बढायो। यो वैधानिकताको खाडल थियो - तपाइँले कसरी थाहा पाउनुभयो कि तपाईंले पर्याप्त गर्नुभयो?
हुन त उनी कुनै भिक्षुको रूपमा निर्दोष जीवन बिताए, लूथरले लेखे, उनको अन्तस्करणको सबैभन्दा ठूलो पीडा उसले आफू परमेश्वरसामु पापी हुँ भन्ने कल्पना गर्न सक्थ्यो। तर म धर्मी, पाप-दण्ड दिने ईश्वरलाई माया गर्न सकिनँ, म उसलाई अधिक घृणा गर्थें ... म परमेश्वरसँग अप्रसन्न थिएँ, यदि गुप्त ईश्वरनिन्दामा होइन, तर एउटा ठूलो गनगनाउँदै मैले भनेँ: दश आज्ञाको व्यवस्थाले सबै किसिमका कुकर्महरूद्वारा सताइएकाहरू पापी, सदाको लागि मौलिक पापले सताइएका पापीहरू? के परमेश्वरले अझै पनि सुसमाचारको माध्यमबाट कष्टहरू थप्न आवश्यक छ र हामीलाई उहाँको धार्मिकता र क्रोधको साथ सुसमाचारको मार्फत धम्की दिनुपर्दछ?
यस्तो कुटिलता र स्पष्ट इमान्दारी सधैं लुथरको विशिष्ट भएको छ। यद्यपि विश्वलाई उनको अर्को कार्य र जीवनको कथा राम्ररी थाहा छ - भोज, भिक्षा र कामका लागि अहंकारी न्यायको भव्य धर्मनिरपेक्ष चर्चको बिरूद्ध उनको धर्मयुद्ध - थोरैले यो बुझे कि यो लुथरका लागि विवेकको प्रश्न नै थियो। उसको आधारभूत प्रश्न अत्यन्तै सरल थियो: एक व्यक्तिले कसरी परमेश्वरसंग न्याय गर्न सक्छ? सुसमाचारको सरलतालाई अस्पष्ट बनाउने सबै मानव निर्मित अवरोधहरूमा लुथरले इसाईमतका धेरैले बिर्सेका कुरामा केन्द्रित गरे - केवल विश्वासद्वारा धर्मीकरणको सन्देश। यो न्याय सबै भन्दा माथि छ र मौलिक आधारमा भिन्न स्वभावको छ - धार्मिक र धार्मिक र धार्मिक क्षेत्रको न्यायको क्षेत्रमा धार्मिक भन्दा धार्मिक।
लुथरले आफ्नो समयको भयावह रीतिथितिको विरुद्धमा गर्जनको आवाज उठाए। Hundred सय बर्ष पछि, उहाँ आफ्ना दोषी सँगी इसाईहरूले जसरी उनलाई हेर्नुभयो त्यो हेर्नु उचित छ: एक जोशिलो पादरीको रूपमा जो प्राय: उत्पीडित पापीको पक्षमा हुन्छ; सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको लागि सर्वोच्च अर्डरको प्रचारकको रूपमा - परमेश्वरसँग शान्ति (रोम:: १); परमेश्वरसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा यातनाको अन्तस्करणको उद्धारकर्ताको रूपमा।
लुथर किसान जस्तो कठोर, असभ्य हुन सक्छ। उनको विश्वासको कारण, धर्मी ठहरिने सन्देशको विरोध गर्नेहरूमा उनी रिसाए। उहाँमाथि सेमिटिज्मको आरोप लगाइएको छ, र विनाकारण। तर लुथरका सबै गल्तीहरूका साथ हामीले विचार गर्नुपर्ने: केन्द्रीय इसाई सन्देश - विश्वास मार्फत मुक्ति - त्यसबेला पश्चिममा लोप हुने खतरामा थियो। परमेश्वरले एक मानिसलाई पठाउनुभयो जसले विश्वासलाई मानव सामानहरूको हताश अन्डरग्रोथबाट बचाउन र यसलाई फेरि आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। मानवतावादी र सुधारवादी मेलान्चथनले लुथरलाई उनको अन्त्येष्टि सम्बन्धी भाषणमा भने कि उनी बिरामी युगमा चर्चको नविकरणको औजार हो।
भगवान संग शान्ति
त्यो इसाई कला मात्र हो, लूथर लेख्दछन्, कि म मेरो पापबाट फर्कन्छु र यसबारे केही पनि जान्न चाहन्न, र केवल ख्रीष्टको धार्मिकतामा फर्कन्छु, मलाई थाहा छ कि ख्रीष्टको अर्थ धार्मिकता, योग्यता, निर्दोषता र पवित्रता हो। निश्चित हुनुहोस् कि मलाई थाहा छ कि यो शरीर मेरो हो। म बाँच्दछु, मर्दछु र गाडी चलाउँछु किनकि ऊ हाम्रो लागि मर्दछ र हाम्रो लागि फेरि उठ्दछ। म धर्मी छैन, तर ख्रीष्ट धार्मिक हुनुहुन्छ। म उनको नाममा बप्तिस्मा लिएको थियो ...
गाह्रो आध्यात्मिक संघर्ष र धेरै कष्टदायी जीवन संकटहरूपछि लुथरले परमेश्वरको धार्मिकता भेट्टाए जुन विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आयो (फिलि। 3,9,)) यसैले उनको गद्यले सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान् भगवानको सोचमा आशा, आनन्द, विश्वासको गीत गाउँदछ, जो सबै थोकको बाबजुद पनि, पश्चाताप गर्ने पापीको साथ ख्रिष्टमा आफ्नो कामको साथ खडा हुन्छ। यद्यपि व्यवस्थाको न्यायको सम्बन्धमा उनी व्यवस्था अनुसार पापी थिए, तर लुथर लेख्छन् कि यदि ऊ निराश भएन भने ऊ मर्नेछैन किनकि मानव जीवन र धार्मिकता र अनन्त स्वर्गीय जीवन दुबै ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ। धार्मिकता र त्यो जीवनमा, लुथर, उहाँ कुनै पाप, अन्तस्करणको कुनै पीडा, मृत्युको चिन्ता थिएन।
लुथरको चम्किरहेका पापीहरूले साँचो विश्वास दाबी गर्न र प्रकाश अनुग्रहको पासोमा नपर्न आश्चर्यचकित र सुन्दर छन्। विश्वास भनेको हामीमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र हामी परमेश्वरद्वारा नयाँ गरी जन्मिनेछौं। अकल्पनीय जीवन शक्ति र अकल्पनीय शक्ति उहाँमा बास गर्नुहुन्छ। उसले केवल राम्रो गर्न सक्छ। ऊ कहिले पर्दैन र सोध्छ कि त्यहाँ राम्रो काम गर्नु छ कि छैन; तर प्रश्न सोध्नु अघि, उनले यो कार्य गरिसकेका छन् र गरिरहनु भएको छ।
लूथरले निःसर्त शर्त राखे, सबैलाई परमेश्वर क्षमा गर्ने शक्तिमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ: इसाईमत भनेको कुनै पनि पाप छैन भन्ने भावनाको निरन्तर अभ्यास बाहेक अरु केही छैन - यद्यपि एक पाप - तर आफ्नै पापहरू ख्रीष्टमा फ्याँकिन्छ। यसले सबै भन्छ। यस बढ्दो धारणाबाट लुथरले आफ्नो समयको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था, पोप्यासीलाई आक्रमण गरे र युरोपलाई सुन्न लगाए। निस्सन्देह, शैतानको साथ उसले भइरहेको संघर्षको खुला स्वीकारोमा लुथर अझै पनि मध्य युगका मानिस हुन्। जसरी हेको ए ओबरम्यान लुथरमा भन्छन् - म्यान बिच ईश्वर र डेभिल: एक मनोचिकित्सकको विश्लेषणले लुथरलाई उसको युनिभर्सिटीमा पढाउने बाँकी सम्भावनालाई हराउनेछ।
यद्यपि: आफ्नो आत्म-उद्घाटनमा, विश्वको आँखाले देख्न सक्ने आफ्नो भित्री संघर्षहरूको प्रदर्शनमा, मास्टर मार्टिन आफ्नो समय भन्दा अगाडि थिए। सार्वजनिक रूपमा आफ्नो रोग पत्ता लगाउने र उत्तिकै शक्तिपूर्वक उपचारको घोषणा गर्ने बारेमा उहाँसँग कुनै गुनासो थिएन। आफूलाई उनको तीखो, कहिलेकाँही असन्तुष्ट, आत्म-विश्लेषणको अधीनमा राख्ने उनको प्रयासले उनीहरुलाई २१ औं शताब्दीमा भेला हुने भावनाको न्यानोपन दिन्छ। उसले गहिरो आनन्दको कुरा गर्दछ जुन हृदयमा भरिन्छ जब मानिसहरूले मसीही सन्देश सुन्छन् र सुसमाचारको सान्त्वना पाउँदछन्; उसले त केवल ख्रीष्टलाई माया गर्थ्यो किनकि उसले यो कानून र कामले गर्दा कहिल्यै गर्न सक्दैन। हृदयले विश्वास गर्दछ कि ख्रीष्टको धार्मिकता तब उसको हो र उसको पाप अब उसको आफ्नै छैन बरु ख्रीष्टको हो; सबै पापहरू ख्रीष्टको धार्मिकताले ध्वंश भएको छ।
के लुथर विरासत को रूप मा देख्न सकिन्छ (आज प्राय: मुखमा प्रयोग भएको शब्द)? अनुग्रहको माध्यमले मुक्ति संग ईसाई धर्मको सामना गर्ने आफ्नो महान् लक्ष्य पूरा गर्न लुथरले तीन मौलिक ईश्वरतान्त्रिक योगदान गरे। ती स्मारकहरू थिए। उनले उत्पीडनको बिरोधमा व्यक्तिगत अन्तस्करणको प्राथमिकता सिकायो। उनी इसाईमतका थॉमस जेफरसन थिए। उत्तरी यूरोपियन राज्य इ England्ल्याण्ड, फ्रान्स र नेदरल्याण्ड्समा, यो आदर्श उर्वर भूमिमा खसेको थियो; त्यसपछिका शताब्दीहरूमा तिनीहरू मानवअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गढ बने।
१ 1522२२ मा उनले नयाँ नियमको आफ्नो अनुवाद प्रकाशित गरे (नेवे टेस्टामेन्ट ड्युत्सचि) इरास्मसको ग्रीक पाठमा आधारित। यसले अन्य देशहरूको लागि उदाहरण बनायो - अब ल्याटिन होइन, तर मातृभाषामा सुसमाचार! यसले बाइबल पढाइ र पश्चिमको सम्पूर्ण बौद्धिक विकास प्रदान ग German्यो - जर्मन साहित्यको उल्लेख नगर्न - एक शक्तिशाली बृद्धि। सोला स्क्रिप्टुरामा सुधारको आग्रह (धर्मशास्त्र एक्लै) शैक्षिक प्रणालीलाई अत्यन्त प्रमोट गर्‍यो - आखिर, तपाईंले पवित्र पाठ पढ्न पढ्नु पर्ने हुन्छ।
लुथरको पीडादायी, तर अन्तत: विजयी अन्तस्करण र आत्मा अनुसन्धान, जुन उसले सार्वजनिक रूपमा गर्‍यो, स्वीकारोक्तिलाई प्रोत्साहित गर्‍यो, जुन संवेदनशील प्रश्नहरूमा बहस गर्ने एउटा नयाँ खुलापन हो जसले जोन वेस्ले जस्ता प्रचारकहरूलाई मात्र प्रभावित गरेन, तर लेखकहरू, इतिहासकारहरू र निम्न शताब्दीका मनोवैज्ञानिकहरू पनि।
ज forest्गल र स्टिकहरू नष्ट गर्नुहोस्
लुथर मानव पनि थियो। कहिलेकाँही उनी आफ्ना सबैभन्दा प्रबल डिफेन्डरहरूलाई लाज मान्दछन्। यहूदीहरू, किसानहरू, तुर्कहरू र रोटेन्जिस्टर विरुद्ध उनको अपमान आज पनि तपाईंको कपाल अन्त्य हुन्छ। लुथर केवल लडाकू थिए, एक घुमाउरो कुल्हाला संग अग्रगामी, जो सामा र सफा। क्षेत्र सफा हुँदा जोत्दा राम्रो हुन्छ; तर ज the्गल र दाउराहरू निर्मूल पार्नुहोस् र खेत तयार पार्नुहोस्, कोही पनि त्यसो गर्न चाहँदैनन्, उनले पत्रमा उनले व्याख्या गरेबाट उनले आफ्नो बाइबलको एपोकल अनुवादको औचित्यलाई व्याख्या गरे।
यसको सबै अन्धकार पक्षहरूसहित: लुथर सुधारको प्रमुख व्यक्तित्व थिए, जुन इतिहासमा एक मुख्य मोड थियो, प्रोटेस्टेन्टहरूलाई विश्वास गर्ने पहिलो शताब्दीका घटनाहरू पछि। यदि यो कुरा हो भने, यदि हामीले व्यक्तित्वहरूको समय र तिनीहरूको समयको प्रभावको आधारमा व्यक्तित्वहरूको न्याय गर्नुपर्दछ भने इसाईलाई वास्तवमै गर्व लाग्न सक्छ कि मार्टिन लुथर ओटो भेन बिस्मार्कको साथ आँखाको स्तरमा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो।